Hitanjaka ny Vovonambe Sosialy Iraisam-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2018 18:17 GMT
Herinandro mialoha ny fisokafan'ny World Social Forum andiany Fahenina (Vovonambe Sosialy Iraisam-pirenena), tsy dia miraharaha loatra ilay hetsika ny tontolon'ny bilaogy Venezoeliana.
Ny bilaogy Aporrea mpomba ny fitondrana irery ihany no weblog mamoaka vaovao momba ny WSF isan'andro. Fitaterana ny voalazan'ny masoivoho mpampiely vavaom-panjakana, ABN, ny ankamaroan'ireo lahatsoratra ireo. Mandritra izany fotoana izany, mandrakotra ireo vaovao momba ny Alternative Social Forum (Vovonambe Sôsialy Solony) (rohy maty) ny bilaogy tsy refesi-mandidy, Colectivo La Libertad, io hetsika io izay hotanterahin'ireo fiaraha-mientana tsy refesi-mandidy ao Venezoela amin'ny herinandro hanatanterahana ny WSF mihitsy. Manoratra momba ny fandaharam-potoan'ny WSF sy ny Alternative Forum ny Reste@dos.
Fihetsehampo iraisan'ireo bilaogera Venezoeliana ny fahatsapàna fa mety tsy haneho tsara ny fanahy nisy tao Porto Alegre ity andiany fahenin'ny WSF ity satria heverina fa hifehy ireo toerana rehetra hanaovana ny Vovonambe ireo mpiasan'ny tafika sy ireo mpiambina filoham-pirenena. Noho izany, hita ho mety kokoa ho an'ny vahoaka mitsinjo ny fiarahamonina ity hetsika Solony ity mba hizaràna hevitra tsy ilàna “fianianana tsy hamadika” ny filoha Venezoeliana.
Ny hetsika mifandraika amin'ny WSF mba hany mahasarika ireo bilaogera Venezoeliana dia ny fanasàna misokatra handray anjara anatinà fijoroan'olona marobe miboridana halain'i Spencer Tunick sary. Bilaogera Venezoeliana roa amby folo fara-fahakeliny no nianiana fa ho avy.
Tenifototra: Foro Social Mundial World Social Forum